Ntụle na-akpụ usoro nke slag nsonye ntụpọ nke nchara nkedo na epc | Yingyi
Ntụle na-emepụta usoro nke slag nsonye ntụpọ nke nkedo ígwè na epc
1 Ọganihu nke ntụpọ nsonye slag na nkedo ígwè nwere epc
Ọ na-esiri ike ịmepụta ihe nkedo ígwè na ihe efu efu. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ n'ime ha bụ ihe nkedo na-eyi uwe, na-ekpo ọkụ na ihe nkedo na-eguzogide ọgwụ na-enweghị nhazi ma ọ bụ obere nhazi, ma ọ bụ ihe nkedo ndị ọzọ dị mkpa. Isi ihe kpatara mmebi nke ihe nkedo carbon dị ala bụ carburization na-enweghị isi na ntụpọ ntinye slag nke akụkụ buru ibu na nke buru ibu. Maka ihe nkedo ígwè nwere ụfọdụ ọkpụrụkpụ na ọtụtụ ihe nkedo ígwè carbon dị ala, akụkụ nke carburization, slag inclusion ma ọ bụ ntụpọ porosity karịrị 60%, nke na-eme ka ọkpụkpụ carbon dị ala na nnukwu ihe nkedo ígwè bụrụ nsogbu siri ike nke. Usoro nkedo furu efu, na ọbụna na-atụle na usoro nkedo ebu efu adịghị adabara maka nkedo ígwè.
1.1 Ụdị ntụpọ nke nkedo epc ígwè
Nrụrụ nke nkedo epc ígwè bụ ntinye slag, porosity na carburization. Ọdịdị nke ntụpọ abụghị mgbe niile, ntụpọ ntụpọ na-adịghị agbanwe agbanwe, na njupụta ntụpọ na-agbasasị nke ukwuu, nke a na-egosipụta na agba agba dị iche iche na eserese metallographic. Ụdị nchịkọta nke ntụpọ bụ nke ukwuu n'ụdị ụyọkọ nwere oke na-enweghị isi na agba agbasa, nke siri ike iwepụ site na nhazi.
1.2 Oke ntụpọ dị na akụkụ igwe nkedo furu efu
Ọnụ ọgụgụ nke ntụpọ na nkedo ígwè epc dị oke elu. Gụnyere iyi -, okpomọkụ - na ihe nkedo na-eguzogide corrosion, ma ọ bụ ihe nkedo ígwè ndị ọzọ dị gịrịgịrị na nke nwere mgbidi, na-enweghị ma ọ bụ na-enweghị igwe. Maka ihe nkedo ígwè nwere mgbidi, ntụpọ na-abụkarị pores na oghere slag na mgbọrọgwụ nke ọnụ ụzọ ámá ma ọ bụ ịrị elu. Maka nkedo nchara siri ike nke mgbidi, ntụpọ na-abụkarị ntụpọ slag subcutaneous. N'ihi na obere carbon ígwè nkedo, na ntụpọ na-akasị n'elu na-ekwekọghị ekwekọ carburization ntụpọ.
1.3 Akụkụ ndị na-enwekarị ntụpọ nke epc ihe nkedo ígwè
Mgbidi mgbidi na ọdịnaya carbon nke nkedo epc ígwè dị iche na akụkụ ebe ntụpọ dị mfe ime. N'ihi na mkpa mgbidi atọ nkedo na-eguzogide ọgwụ, na-apụtakarị na nkedo na ọnụ ụzọ ámá ma ọ bụ riser jikọtara akụkụ. Akụkụ ndị jikọtara na nkedo nkedo ndochi usoro, na-erugharị ruo ogologo oge, ka oge okpomọkụ na-adị ogologo, nchara a wụrụ awụ na-ekpo ọkụ na-ebu ihe, ihe na-akpụ akpụ, na-agbaze akụkụ na-etinyekwu gas n'ime igwe mmiri mmiri na nchịkọta slag site na igbochi. , mgbaze ígwè jụrụ na solidification shrinkage, mfe ime ka akụkụ ndị a mgbe obi jụrụ solidification ụdị oghere, shrinkage porosity, slag weere ntụpọ.
2. Pụrụ iche nke ebu ndochi nke epc nkedo ígwè
A na-etolite ntụpọ nkedo n'oge ndochi nkedo usoro siri ike, n'ozuzu oge ndochi nke obere obere na nkedo dị mkpụmkpụ, na oge ndochi nke nnukwu ihe nkedo dịkwa mkpụmkpụ. Dị iche na nkedo oghere nkịtị, ihe dị iche iche nke ndochi ebu nke ihe nkedo epc bụ isi ihe kpatara ntụpọ ntinye slag nke nkedo epc ígwè.
2.1 Na-ejuputa ụdị nkedo epc ígwè
N'ihe gbasara usoro ndochi nke mmiri mmiri nke epc, ọtụtụ nyocha na-adabere na ntinye nke epc maka aluminum alloy, na ọtụtụ n'ime ha na-ejupụta na-enweghị nrụgide na-adịghị mma. N'okpuru ọnọdụ ndị dị otú ahụ, ọdịdị nke mmiri mmiri ndochi metal bụ na mgbe ịbanye na nkedo "oghere" site n'ọnụ ụzọ ámá dị n'ime, mmiri mmiri metal n'ihu na-aga n'ihu n'ụdị fan. N'okpuru omume nke ike ndọda, mmiri mmiri metal na-ejuputa n'ihu na-emebi ala, ma ihe na-emekarị bụ ịkwapụ n'ọnụ ụzọ dị n'ime ruo mgbe "oghere" jupụtara. Ụdị ókèala nke kọntaktị n'etiti mmiri mmiri na udi na-ejikọta ya na okpomọkụ nke mmiri mmiri mmiri, njirimara nke ihe ọdịdị na njuputa ngwa ngwa. Ọ bụrụ na okpomọkụ nke mmiri mmiri metal dị elu, njupụta udi dị ntakịrị ma na-ejuputa ngwa ngwa ngwa ngwa, n'ozuzu na-aga n'ihu ọsọ nke mmiri mmiri metal bụ ngwa ngwa. Ọ na-adịgasị iche na ụdị alloy, wụsa okpomọkụ, mpaghara sprue, agbapụta ọsọ ọsọ, ọdịdị ọdịdị, elu okpomọkụ ikuku permeability nke mkpuchi na nrụgide na-adịghị mma. Maka aluminum alloy na-enweghị nrụgide na-adịghị mma, interface dị n'etiti metal mmiri na udi nwere ike kewaa n'ime ụdị anọ dịka ọnọdụ dị iche iche: ọnọdụ kọntaktị, ọnọdụ nkwụsịtụ, ọnọdụ ọdịda na ọnọdụ ntinye aka.
2.2 Turbulent morphology na mmetụta mgbakwunye mgbidi nke ndochi igwe mmiri
Na ebu na mmepụta nke nkedo ígwè, Nkedo ígwè iberibe, Chinese ụlọ ọrụ na-na usoro nke nkedo na-etinye na-adịghị mma nrụgide na akọrọ ájá nkedo, na-ikesie nke akọrọ ájá ebu, na-eme ka ebu na-ezuru ike na isiike, iguzogide mmetụta nke mmiri mmiri metal na buoyancy, hụ na wụsara zuru ezu. na nkwụsi ike na usoro ahụ nke ọma, iji nweta nhazi zuru oke nke nkedo. Akpụkpọ aja akọrọ nwere ike zuru oke na isi ike na-enweghị ịbawanye elu nke igbe ájá. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na mmepe teknụzụ nkedo ọnọdụ furu efu.
3 Nyocha nke isi iyi na thermodynamics na kinetics nke nsonye slag na nchara a wụrụ awụ
Enwere ọtụtụ isi mmalite nke slag na gas na nchara a wụrụ awụ, gụnyere ihe fọdụrụ na gas nke ngwaahịa pyrolysis dị ka gasification, ihe fọdụrụ na gas a na-emepụta na usoro mgbaze nke ígwè gbazere, na ihe fọdụrụ oxide nke oxidation nke ígwè gbazere kpụrụ, na mgbasa. nke ụfọdụ gas site na nnukwu okpomọkụ gbazere nchara. N'ihi ntakịrị njupụta nke dregs na gas ndị a, ha ga-ese n'elu elu nwayọọ nwayọọ na usoro ndochi na mmiri oyi usoro tupu ikwagide, na-ese n'elu na ala transverse mgbali n'okpuru omume nke ọjọọ nrụgide.
4 Ụzọ na aro iji belata slag nsonye nke akụkụ ígwè nwere nkedo ebu efu
4.1 Kpọmkwem belata ntinye mbụ na nchara a wụrụ awụ
Mbelata ntinye na nchara a wụrụ awụ tupu awụsa ya bụ otu n'ime ụzọ isi belata ntụpọ nsonye slag na nkedo ebu efu. E nwere ọtụtụ ụzọ iji sachaa nchara a wụrụ awụ, dị ka iji ihe slagging, na-adabere na mgbasa ozi nke onye na-eme ka ọ dị ọcha na nsonye, ​​na-eme ka obere akụkụ nke nsonye dị na nnukwu akụkụ nke ihe na-eme ka ọ dị ọcha, na-akpụ nnukwu olu nke nsonye. ahụ, nke bara uru iji meziwanye ọnọdụ ike nke na-ese n'elu mmiri.
4.2 Belata ntinye na nchara a wụrụ awụ site na usoro teknụzụ ma mee ka mwepụta nke nsonye sie ike.
(1) ezi uche imewe nke agbapụtara riser usoro. Dị ka o kwere mee na ihe na-erughị otu igbe nkedo, dị ka o kwere mee iji belata ịdị adị nke nchara a wụrụ awụ n'ime oge nhazi oge, ya bụ, belata ma ọ bụ kagbuo onye na-agba ọsọ; Ihe karịrị otu igbe nkedo ga-eme ka usoro ịwụsa ahụ dị ogologo. Mgbe nchara a wụrụ awụ jupụtara na usoro ịwụsa, ọ dị mfe ịmepụta ọgba aghara na ịgbasa na multi-bend na mgbanwe ngalaba nke usoro ntinye mmiri, nke na-ebelata okpomọkụ nke ígwè a wụrụ awụ, na-eduga n'ịgba ígwè oxidation, na-ekpuchi mgbidi dị n'akụkụ. nke sprue, ma na-abawanye ntinye mbụ na nchara a wụrụ awụ.
(2) belata ọdịdị nkwonkwo nrapado. Ọdịiche njikọ nke ọdịdị dị ukwuu, dị mfe ime ka ọdịiche ahụ na mgbanwe dị ukwuu na gluu, na-ebute nkwonkwo nrapado convex ma ọ bụ concave. N'ihi njupụta dị elu nke convex adhesive, gas na ihe fọdụrụ na-emepụta mgbe gasification na-eme ka ọ dịkwuo elu, na-eme ka mmụba nke mkpokọta slag; Gluu concave adhesion gluu na-etolite oghere, mgbe mkpuchi mkpuchi, mkpuchi nke nwere ikike siri ike na-abanye ngwa ngwa na oghere concave.
(3) Mbelata kwesịrị ekwesị nke nrụgide na-adịghị mma. Nrụgide na-adịghị mma bụ ihe dị mkpa na-eme ka ọgba aghara na-abawanye site na ndochi ígwè gbazere. Ọgba aghara na-abawanye na-eme ka nchara a wụrụ awụ na-akpachapụ sistemu mmiri ahụ na mgbidi “oghere” ahụ, na igwe a wụrụ awụ na-efesa karịa, na-akpụ vortex na-asọpụta, na-etinye ngwa ngwa na ntinye na gas. Ụzọ kwesịrị ekwesị bụ izute ike kwesịrị ekwesị na nkwụsi ike nke nkedo ájá akọrọ ma hụ na nkedo adịghị ada n'ime usoro ịwụsa ndochi, na-ebelata nrụgide na-adịghị mma, ka mma.
Oge nzipu: Sep-24-2021